Knowledges Zone: ကွန်ပျူတာ window ကိုယ်တိုင် တင် နိင် ရန်
ပထမဆုံးအနေ နဲ့ window ခွေတစ် ခွေရှိဖို့ တော့ window အမျိုးအစားများစွာ ရှိ ပါ တယ် ..(window me,window xp sp1 ,sp2,sp3 , linux ,window7နဲ့ နောက် ဆုံးခုထွက်တာ က window 8 ပါ..ဟိုးအ၇င်၂၀၀၂-၂၀၀၃ခုနစ် က ဆို window ကို floppy disk နဲ့ တင် ကြ ရပါ တယ် ..ခုနောက် ပိုင်းမှာ တော့ CD နဲ့ တင် ကြ ရပါ တယ် လွယ် ကု တာ ပေါ့ နော်.. window ကို ကိုနဲ့ လိုက် မဲ့ window ခွေဝယ် ပြီးသိမ်းထားသင့် ပါ တယ်.. windowက လည်း တင် ချင်တိုင်းတင် မရဘူး window xp က တော့ ဘာ မှ မဖြစ်ပေ မဲ့
window 7က ကျ တော့ လို တယ် သူ့ တင် ဖို့ ဆို အနိမ့် ဆုံးအဆင့် Processor pentium4speed 3400 ,RAM 1Gb လောက် မှသုံးလို့ ကောင်းရုံပဲ ရှိ ပါ တယ်. အကောင်းဆုံးက Core2Duo Processor ,Ram 2gb ရှိမယ် ဆို ရင် တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ .. အခုအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ window sp3,sp2 ကို ကျွန် တော်ေ၇းသားသွားပ့ါမယ်....
၁။ ပထမဆုံးအနေ Window ခွေဖတ် အောင် Bios ထဲ မှာ သွားပြင် ရပါ မယ်..အချို့ သော စက်တွေ မှာ မပြင်ရသေးရင် ပြင် ရပါ မယ်.Motherboard အသစ် ဆို ရင် တော့ ပြင် ကြ ရပါ တယ်... window ခွေ မထည့် ခင် ကွန်ပျူတာ စဖွင့် တာနဲ့ Delete Key ကို နိပ် ပါ
Bios screenပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် Bios screen မှာ Advanced Bios features ထဲ ကို ၀င် ပါအဲ့ ဒီ ထဲ မှာ မှBoot devices select ထဲ ကို ၀င် ပါ boot devices ထဲ မှာ 1st ,2nd ,3th ဆို ပြီးတွေ့ ပါ လိမ့် မယ်.. first boot ကို CD Rom ရွေးပါ (+,-) နဲ့ ရွေးရပါ တယ်2nd ,3th ကိုတော့ HDD ,Floppy ထားပါ..change ပြီးသွားရင် တော့ (F10) key ကို နိပ် ပါ အဲ့ မှာ (yes ,No) တောင်းပါ လိမ့် မယ် (y) key ကို နိပ် ပါ Save လုပ် မှာ လား မေးခြင်းပါ .. restart ကျ သွား ပါ လိမ့် မယ် ..ပထမအဆင့် ပြီးဆုံးပါ ပြီ
၂။ Restart ကျ ပြီးလို့ ပြန် တက် လာ တာ နဲ့ Screen အနက် ပေါ်မှာ (Press any key Boot from CD Rom )ဆို ပြီးပေါ်လာ ပါလိမ့် မယ် ပေါ်လာ တာ နဲ့ Enter နိပ် ပါ window စပြီး တင် ပါပြီ ..window setup စတင် ပါ ပြီ သူ့ ရဲ့ Loading files တွေလုပ်ပြီးတဲ့ အခါ...welcome to set up screenပေါ်လာ ပါလိမ့် မယ် အဲ့ ဒီ မှာ Enter =continue ,R=repair,F3 =quit ဆိုပြီးပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် enter ကို နိပ် ပါ...Next screen က window xp Agreement screenပေါ် လာ ပါလိမ့် မယ် အဲ့ ဒီ မှာလည်းF8=i agree,
ESC =i don't agree ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် F8 ကို နိပ် ပါ...2nd step ပြီးဆုံးပါ ပြီ..
၃။ Agreement page ပြီးသွား၇င်Next Page ပေါ်လာပါလိမ့် မယ် Window xp edition set up screen ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ်
အဲ့ ဒီ မှာ မိမိ HDD ဘယ် လောက် ရှိ သလည်းဆို တာ ကို ပြ ပါ လိမ့် မယ် Exp (16000mb) Hdd 160 gb ကို ဆိုလိုခြင်းပါ .. အဲ့ ဒီ မှာ
ွှီTo delete the selected partition, press ( D) .To createapartition is the unpartitioned space ,press (C ). To set up the window xp on the selected item,press (ENTER) ဆိုပြီး ရှိ ပါ တယ်.. ပထမဆုံးအနေနဲ့ မိမိကွန် ပျုတာ HDD (hard disk ) အသစ် ဆို ရင် တော့ partition ခွဲ ရ ပါ မယ် .. အသစ် ဆို ရင် (C)ကို နိပ် ပါNext page ပေါ်လာ ပါလိမ့် မယ် partition create လုပ် ဖို့ (C) ကို နိပ် တာ ပါ..Next page မှာ create partition of size Mb ဆိုတဲ့ အဖြုကွက် လေးထဲ မှာ မိမိ HDDရဲ့ Free space ကို ပြ ပါ တယ်စတင် ပြီး window အတွက် partition စခွဲ ရ ပါ မယ် ဥပမာ Hdd 160 gbဆိုပါဆို့ 16၀၀၀၀ mb ကို အဖြူကွက် လေးထဲ မှာပြ ပါ လိမ့် မယ် အဲ့ ဒီ ၁၆၀၀၀၀Mb ကို back space နဲ့ ဖျက် ပါပြီးရင် ကိုယ် က window အတွက် 40Gb ထားမယ် ဆို ပါ စို့
အဖြူကွက် လေး ထဲ မှာ 40000 mb ဆိုပြီးရိုက် ထည့် ပါပြီး၇င် Enter နိပ် ပါ window အတွက် 40 Gb ကို create လုပ် ပြီး သွားပါ ပြီ
လုပ် ပြီးသွားရင် (D,C,Enter) ဆို တဲ့ Screen ပြန် ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် အဲ့ ဒီ မှာ ပထမ ဆုံးpartition မှာ( 40gb) အတွက် 39999mb ဆိုပြီး ပြ ပါ လိမ့် မယ် ဒုတိယ မှာ unpartitioned space ဆို ပြီး ကျန် တဲ့ free space ကို ပြ ပါတယ် ..ဒုတိယ partition အတွက် unpartition space ဆိုတဲ့ နေရာ ကို down arrow နဲ့ သွား ပါ ပြီးရင် (c) keys နိပ် ပါ ပြီး ရင် အပေါ် မှာ window အတွက် partitionခွဲ သလို ပဲ အဖြူကွက် လေး ထဲ မှာ ဒုတိယ partition အတွက် ဘယ် လောက် ဆို တာ ရိုက် ထည့် ပါ.. ပြီးရင် enter နိပ် ပါ ..အဲ့ လို ပဲ 3th partition အတွက် လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ပါ ပဲ unpartitioned space ကို ရွေး(C)နိပ်
partitionခွဲ Enter နိပ် 4th partition အတွက် လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါ ပဲ unpartitioned space ကို ရွေး(C)နိပ် partitionခွဲ Enter နိပ် ပါ.. Partition အားလုံးခွဲ ပြီး သွား ရင် တော့ အပေါ် ဆုံးpartition ကိုေ၇ွးပါ အဲ့ ဒီ partition က window တင် ဖို့ ပါေ၇ွးပြီးရင် ပြီးရင် enter နိပ် ပါ window install စလုပ် ပါ ပြီ( မှတ်ချက် ။ 2nd 3th 4th တို့ တွင် မတင် ပါ နဲ့ Error တတ် တက် ပါ တယ် ..တင် လို့ မရဘူးမဟုတ် ပါ တင် လို့ ရပါ တယ် ဒါ ပေ မဲ့ window ဆို တာ (C partition )မှာ ပဲ ရှိ တာ အကောင်းဆုံးပါ)
HDD အသစ် အတွက် ပြော ပြီးသွား ရင် အဟောင်း အတွက် ပြော ပါ့ မယ်.. HDD အဟောင်းဆို ရင် (D,C,enter) screen ပေါ်လာ ရင် ESC နိပ် ပါ အချို့ က နိပ် စရာ မလို ပါ ဘူး တစ်ခါထည်းပြ ပါ တယ်.. အချို့ က တော့ နိပ် ပေးရပါ တယ်.. ESC နိပ် ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်ီံ အဟောင်း မှာ ရှိ တဲ့ partition တွေပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် ပထမ ဆုံးPartion C က windowအဟောင်းပါ .. အ၇င် ဆုံး window အဟောင်းကို ဖျက် ရ ပါ့  မယ်အဲ့ ဒီ အတွက် D key ကို နိပ် ပါ ပြီးရင် next scree ပေါ်လာ ပါ လိမ်မယ်(L) key ကို နိပ် ပါ ပြီးရင် (D,C,Enter) screenပြန် ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် အပေါ်ဆုံး C က free ဖြစ် သွားပါပြီ... အဲ့ ဒီfree ဖြစ် သွား တဲ့ (C partition) နေ ရာ ကို ရွေးပါ (C) နိပ် ပါ ပြီးရင် next screen ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် enter နိပ် ပါ ပြီးရင် (D,C,Enter ) screen ပြန် ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် create လုပ် ပြီးသား(C -partition ) ကို ရွေးပြီးenter နိပ် ပါ ... window install စတင် ပါ ပြီ...(မှတ်ချက်။(D,C ,Enter )
ပေါ်လာတာ နဲ့ C partition ကို ရွေးပြီး enterနိပ် မယ် ဆို ရင် window နစ်ထပ် ဖြစ် သွားတတ် ပါ တယ် .. အရင် ဆုံးအဟောင်းကို ဖျက်ပြစ်ရပါ မယ်...)....
ဒီ အဆင့် က Window တငိ ရာ မှာ အသားပါ... ခက် တယ် ထင် ရ ပေ မဲ့ မခက် ပါ ဘူး စမ်းကြည့် ပါ ... အထက် မှာေ၇းထားတဲ့ ပုံ အတိုင်းစမ်းကြည့် ပါ.. သတိတော့ ထားပါ partition ပိုင်းဆို တော့ နည်းနည်း သတိထားရပါ တယ်..သူလည်းscreen မှာ မမှားအောင် ပြ ထားပါ တယ် အလျှင် စလို မလုပ် ပါ နဲ့ ..HDD ပျက် တတ် ပါ တယ်။( ဥပမာ partation ခွဲ တဲ့ နေ ရာ မှာ သုည တစ် လုံးရော့ တာ နဲ့ window အလုပ် မလုပ် ပါ ဘူး 40Gb ခွဲ တယ် ဆို ပါ စို့ ၄၀၀၀၀mb ကို သုညတစ် လုံးမေ့ သွားရင် 4gb ဖြစ် သွားတတ် ပါ တယ် )
Fig(5).(D,C,Enter ) Screen ,
င်္င်္Fig(6 ) Partition ခွဲ ၇န် screen
Fig (7 ) Partition ခွဲ ပြီး C partion free ဖြစ် နေ ပုံ. window install လုပ် ရန် enter မနိပ် ခင်
၄။ window partition ခွဲ ပြီးလို့ Enter နိပ် ပြီး ရင် window install မလုပ် ခင် Fileေ၇ွးတဲ့ Screen ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ်(NTFS ,FAT) file ကို တစ် ခုေ၇ွးရပါ မယ် အဲ့ ဒီ မှာ(Quick) ရှိ သလို (Normal ) လည်းရှိ ပါ တယ် မြန် ချင် လို့ (quick) နဲ့ တင် ရင် ရ တဲ့ အခါ ရ သလို မရ တဲ့ အခါ တွေ လည်း ရှိ တတ် ပါ တယ် window file တွေကျန် တတ် ပါ တယ်...အကောင်းဆုံးက (normal ) နဲ့ တင်ပါnormal NTFS က အကောင်းဆဲုံးပါ ပဲ FAT file ကို လုသုံးနည်းပါ တယ်.... NTFS normal file ကို ရွေးပြီး enter နိပ် ပါ window install စတင် ပါ ပြီ..မည်သည့် key မှ နိပ် စရာ မလို ပါ .autoသွားပါလိမ့် မယ်.auto C partition ကို format ချ ပါ လိမ့် မယ်.. Copy file ဆို ပြီး auto လုပ် ပါ လိမ့် မယ် ... copy file ပြီးဒါနဲ့ Restart Auto ကျ သွား ပါ လိမ့် မယ်
Fig(8)Format ချ ရန် file ရွေးခြင်း
၅။ Format နဲ့ copy file လုပ် ပြီးရင် Restart auto ကျ သွား ပါ လိမ့် မယ် restart ကျ ပြီးပြန် တက် လာ ရင် အနက်ေ၇ာင် screen ပေါ်မှာ boot from CD ROm ဆိုပြီးတစ် ဖန် window စတင် တုန်းက လို ပြန် ပေါ်လာပါလိမ့် မယ် မည် သည့် Key မျှ မနိပ် ပါ နဲ့ လွတ် ပေးထားပါ ဘာ Key မှ နိပ် စရာ လို ပါ အကယ် လို့ နိပ် ခဲ့ ရင် window စတင် တဲ့ နေ ရာ ကို ပြန်ေ၇ာက် သွား ပါ လိမ့် မယ်
းး လွတ် ပေး ထားပါ Window xp screen ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ်.. ပြီးရင် window Icon များအတွက် file install လုပ် တဲ့ ၃၉ မိနစ်screen ပေါ်လာ ပါ လိမ့် မယ် ကို က ဘာ မှ လုပ် စရာမလို ပါ..auto သွားပါ လိမ့် မယ်.. 39 min screen ရဲ့ ၂၆-၂၇ မိနစ် လောက် မှာ (Time Zone ) ရွေး ရပါ မယ် .. မိမိနေ ထိုင် တဲ့ နိင် ငံ ( GMT+ ? )ရွေးရပါ မယ်.. time zoneေ၇ွးပြီးရင် networkေ၇ွးရပါ မယ့်မသိရင် စာကို သေ ချာဖတ် ပါ .. အလွယ် လုပ် မယ် ဆို ရင် လည်း enter သာနိပ် ပါ.. 39 minutes Screen ပြီးတာ နဲ့ window တက် လာ ပါ ပြီ... ဒီ မှာ window တင် ခြင်းပြီးဆုံးပါ တယ်
Fig(9 ) window Xp screen
Fig (10 ) 39 minutes Screen
၆။ window တက် လာ တာ နဲ့ အားလုံးပြီးသေး ပါ ဘူး ... မိမိ window sound ထွက် အောင် လုပ် ရ ပါ မယ် ..အဲ့ ဒီ အတွက် motherboard ၀ယ် ရင် သူ့ ရဲ့ install disk ပါ ပါ တယ်.. အဲ့ ဒီ ထဲ က မိမိ လို အပ် တဲ့ sound soft ware ကို install လုပ် ပါ ..
ဥပမာ-Realtalk HD(****) soft ware ရှိ ပါ တယ် run ပါ ပြီးရင် ... ပြီးရင် Net work အတွက် motherboard ခွေ မှ Net work adapter software ကို Run ပါ ... အားလုံးပြီး ပြီးဆို restart တောင်း ပါ လိမ့် မယ် ..restart ချ ပါ ... motherboard ခွေကို ပြန် ထုတ် ပါ ပြီးရင် ... Video card 0ယ် တဲ့ အခါ motherboard လို ပဲ CD ခွေ ရှိ ပါ တယ် ထည့် ပြီး Run ပါ .. (Sound, VGA ,Network ) အားလုံးRun ပြီးရင် တော့ window တင် တာ အဆုံးသတ် ပါ ပြီ... ကျန်တဲ့ application ပိုင်းက တော့ မိမိနစ် သက် ရာ Run လို့ ရ ပါ ပြီ.. အဓိက window မှာ ရှိ သင့် ဒါ တွေက ( Microsoft Office, Mozilla firefox exploter, Win RAR ,Adobe reader) တို့ က တော့ window မှာ ရှိကို ရှိ ရ ပါ မယ်... Fontကို တော့ ဇော်ဂျီ Run ပြီး font လေးကို control panel ထဲ က font folderမှာ paste ချ ပါ လို အပ် တဲ့ font တွေကို လည်း အဲ့ ဒီ folder ထဲ မှာ paste ချ ပါ ... အဲ့ ဒါ တွေပြီးရင် တော့ window perfect ဖြစ် သွားပါ ပြီ